Idealism nke Rabbi Moshe Rat - Rabbi Michael Avraham
Idealism nke Rabbi Moshe Rat
Nzaghachi > Atiri: Nkà ihe ọmụma > Idealism nke Rabbi Moshe Rat
Kobe Ajụrụ ya ọnwa 7 gara aga
Achọrọ m ịjụ ihe ị chere gbasara usoro echiche nke Moshe Rat na-akwado,
The idealistic worldview o gosipụtara, na-arụrịta ụka n'ụzọ sara mbara na ihe nile bụ eziokwu bụ echiche, a ngwaahịa nke mmadụ nsụhọ, nke na-esi na ibu-nsụhọ nke Chineke.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, eziokwu bụ ụdị nrọ nke dị na nsụhọ nke onwe, naanị eziokwu bụ nrọ nke mmadụ niile na-ekerịta, ọ bụghị nke gị.
1. Nke a dabere, n'etiti ihe ndị ọzọ, na ọmụmụ sitere na quantum (ma eleghị anya metụtara mmetụta nke nleba anya na nha, wdg).
2. Dịkwa ka ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwupụta na mbọ iji guzobe ịdị adị nke ihe niile dara ada, ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị eziokwu dị adị bụ nsụhọ. N'uche.
Ọzọkwa, n'ọnọdụ ebe ọrụ ụbụrụ na-ebelata ma nwee nkwarụ - ndị mmadụ na-enweta ahụmahụ ọgụgụ isi dị ukwuu karịa ọnọdụ nkịtị.
Dịka ọmụmaatụ n'ihe gbasara ahụmahụ ọnwụ dị nso ma ọ bụ n'okpuru mmetụta nke ọgwụ ụfọdụ. Ya mere, ọ na-eru nso na ala nke mbụ superconscious. ~ / Otu ịdị n'otu. Na ndị ọzọ.
4. Ọzọkwa, n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe mere nke a obibia, na ọ dịkwa mfe ọ na-arụ ụka na ọ kwesịrị ntụkwasị obi.
5. Na ezi echiche ụwa bụ efu. Yabụ kama ịrapara n'ọhụụ ụwa nke oge ochie, mmadụ nwere ike ịmalite n'ọganihu nke echiche.
(Echere m na o nwere ọtụtụ arụmụka ọzọ mana ọ bụghị n'ezie edobere ha niile).
Dabere na ụzọ ndị a, enweelarị ndị na-ewu ụdị ụdị ọ bụla iji kọwaa eziokwu.
Ka e were ya na ụbụrụ, dị ka usoro Castrop si dị, bụ nanị "otu nsụhọ anyị si ele onye na-ekiri ihe anya." Uche na nsụhọ abụghị ihe abụọ dị iche iche, ma uche bụ ihe ngosi anya na nke a na-ahụ anya nke nsụhọ.
Mkpado ajụjụ: Idealism, Moshe oke, Castrop
mikyab Ndị ọrụ A zara ọnwa isii gara aga
Rabbi Moshe Rat bụ nwa akwụkwọ mbụ na enwere m ekele maka ya. Anaghị m ekerịta ọtụtụ n'ime echiche ya na karịsịa ọchịchọ ya nke echiche efu na echiche. Arụmụka ndị ị dere ebe a n'aha ya (Amaghị m nkọwa ya. Agụbeghị m) ọ dị m ka enweghị isi, gụnyere ntọala sayensị ha.
Ihe a na-ekwu na eziokwu bụ nrọ nke dị na nsụhọ nkeonwe yiri ka m na-emegiderịta onwe ya. My onye nsụhọ Onye? Nke m? M pụtara na m dị? Naanị m dị? Gịnị kpatara iche na ọ bụ naanị m dị ma ndị ọzọ niile adịghị? Na ndị ọzọ nke eziokwu adịghị ma? Chineke dịkwa? Olee otú o si mara?
Na maka ndabere "sayensị sayensị", aghọtaghị m ihe njikọ nke quantum bụ. Mmetụta nke nha na eziokwu bụ ajụjụ siri ike, ma echiche na-ekewa banyere ya, ọ bụkwa ihe doro anya taa na "ntụgharị" adịghị achọ cognition nke mmadụ (ọbụlagodi nha site na kọmputa na-akụda ọrụ ebili mmiri), megidere ihe a nabatara. na akwụkwọ ndị a ma ama. Na ihe dị egwu.
Kobe Zara ọnwa isii gara aga
Anọkwaghị m na nkwupụta ya niile, naanị site n'ihe m gara nkenke gbasara ha, o nwere nkwupụta ole na ole ọzọ na webụsaịtị akụkọ ya.
N'ezie ọ na-eche na ndị ọzọ dị. Ma dị nnọọ ka na nrọ onye ọ bụla nwere ike rọrọ nrọ dị ka nke a n'ụwa anyị, nsụhọ na-arọ ọnụ na a maara ihe. Ọ dị m ka ihe atụ nke ụdị egwuregwu kọmputa nwere ike igosi okwu ya n'ụzọ dị mma. M na-echekarị na ọ bụ usoro metaphysical maka eziokwu na ọ bụ ụzọ dị n'otu.
Mana ka o sina dị,
Kedu ihe na-esiri m ike n'okwu a, olee otú i chere na ị ga-ekwurịta okwu a? Ma ọ bụ n'okwu ndị dị otú ahụ?
Kedu ka esi ebute oriri na ọṅụṅụ ebe a ma ọ bụ ebe ahụ? Ma tụlee nkwubi okwu ma mee mkpebi.
A sị ka e kwuwe, o doro onye ọ bụla anya na dị ka Kant si kwuo, ọ dịghị ihe àmà maka ịdị adị nke eluigwe na ala na ihe ahụ n'onwe ya (Nuumana). Ma anyị na-ezute mgbe niile naanị na onu (ma e wezụga n'ihi na anyị dị adị)… Ma mgbe ahụ, gịnị mere okpukpu abụọ ihe na-adịghị iche na ọ bụ nanị onu na-arụ ọrụ? (Dị ka ụdị agụba Oakham ma ọ bụrụ na ọ bụ ebe a ma ọlị)
Ahụla m na ajụjụ gị si na mkpọda na-amị amị gbasara enweghị obi abụọ ebilitela, ma eleghị anya, kaboodu;).
Ma, o doghị anya na ekwesịrị ibipụta ebe a n'ihi na ọ bụghị usoro obi abụọ, kama ọ bụ nkọwa metaphysical nke eziokwu.
Ma eleghị anya, a ga m ajụ ihe dị iche, gịnị kpatara rabaị ji were dualism na ndị ọzọ dị adị nakwa na G-d dị?
Echere m na ọ bụ otú ahụ ka ọ si ele ya anya. Na ọ dịghị ihe mere obi abụọ ya na n'ozuzu ya nghọta na mmetụta mba? Mana echiche nke ihe omume nke na-enye nkọwa zuru oke maka ihe ndị a abụghị nke enweghị obi abụọ n'ihi na ọ dị ka * ntụgharị * / ọzọ ọzọ. Ma ọ bụ na ọ dịghị gị ka nke a bụ nkwupụta ziri ezi (n'ihi na n'ikpeazụ ọ na-emegide echiche na e nwere tebụl n'ihu anyị)?
Echekwara m na ọ nwere ike ịbụ Bohrs ka ị kpọtụrụ aha na kọlụm 383 siri ezigbo ike itinye nkọwa a n'ọrụ, n'ihi na ọ bụ asụsụ na-enweghị aha (ma e wezụga ndị ọzọ) ma ọ bụ naanị na ngwaa na ntụgharị ha. Ma n'aka nke ọzọ, ọ dị ka ọbụna na egwuregwu kọmputa anyị na-emeso ihe dị ka ndị dị adị. Ma ọ bụrụ otú ahụ ọzọ, nkwekọrịta ahụ yiri ka ọ dakọtara na ọnụ.
Onye ikpe ikpe ikpeazụ Zara ọnwa isii gara aga
N'ihi ya, kama ikwu okwu, ọ ga-esi n'elu ụlọ elu dị elu madaa onwe ya n'ọnụ ọnwụ wee teta n'ụra ahụ. Ma ọ bụ ọ ga-elekọta ịkagbu ike ndọda na nrọ ya wee mepee anyị ụgbọ ala nrọ na-ese n'elu ikuku.
mikyab Ndị ọrụ	Zara ọnwa isii gara aga
Aghọtaghị okwu ndị a, ma na-amaghị otú e si atụle ha (ma ọ bụ ịhụ ihe ọ bụla isi na-eme otú ahụ).
Ndo maka igbu oge ahụ m nọ nnọọ na-arụsi ọrụ ike ma chọọ ịza ajụjụ.
Aghọtaghị m ọnụ ọgụgụ isi ihe dị n'ahịrị a.
1. Mbụ kwupụta nghọtahie nke okwu.
Ndị rabaị nwere ike ịghọta echiche ahụ n'ihi na ihe niile anyị maara bụ naanị "echiche" anyị abụghị ihe ahụ n'onwe ya. N'ihi ya, e nwere ike ikwu na n'ezie ihe niile dị ma e wezụga ndị ọzọ, bụ naanị na "anyị" nghọta. Ọ dịghịkwa anyị mkpa ịgbakwụnye n'echiche bụ ịdị adị nke ihe kwa otu. ~ Dị ka nrọ. Naanị ebe a ka ọ bụ nrọ nkekọrịta.
Ọ bụrụ otú ahụ.
2. Ya mere ugbu a, anyị nwere nhọrọ abụọ iji kọwaa eziokwu.
A. M na-ahụ tebụl na n'ezie e nwere "ihe dị otú ahụ" mpụga m.
B. M na-ahụ a tebụl, ma n'ezie ọ bụ naanị na m nsụhọ na ọ bụghị n'èzí. Ejikọtara ya ebe ahụ site na ihe na-ahazi nke a ka anyị kwuo Gd. Na onye nhazi ka ọtụtụ mmadụ wee hụ ya. Ụdị egwuregwu imekọ ihe ọnụ na kọmputa.
Ọ bụrụ otú ahụ, olee otú a ga-esi họrọ nkọwa "ezigbo"?
A sị ka e kwuwe, ọ ga-abụ dị ka ụfọdụ etuities na-ekwu maka A. na ụwa dị otú ahụ dị. Na maka B. na anyị ahụbeghị ụwa a kwa otu mana anyị na-ezute ya mgbe niile site na nghọta.
Ọ dị ka ihe ezi uche dị na ya ịhọrọ nkọwa dị mfe ma ọ bụrụ na ọ na-akọwa otu data ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịhọrọ B. Mana o doghị m anya na nke a bụ eziokwu na nke a. Na ọtụtụ usoro. Ma ebe a ọtụtụ ndị na-eche dị ka A.
Ma ọ bụrụ otú ahụ, a na m ajụ otú o si kwesị ekwesị nakwa n’ụzọ ezi uche dị na ya ịtụle okwu a.
N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na onye rabaị amaghị otú e si atụle ya, gịnị kpatara o ji chee na Rabbi Moshe ezighị ezi na o ziri ezi ??
3. Gịnị mere na unu ahụghị uru ọ bụla ná nkwurịta okwu a? Ọ bụ n'ihi enweghị ike ikwurịta ya (ma ọ bụrụ otú ahụ, olee otú mmadụ ga-esi kwuo banyere "mmejọ" nke ụzọ a). Ma ọ bụ n'ihi na ọ dịghị NFKM (ma ọbụna nke ahụ ezighị ezi, e nwere ọtụtụ ihe na-adị adị na nkà ihe ọmụma larịị, dị ka ndị na-akwado usoro a na-ekwu)
4. N'ụzọ anụ ahụ, ọ ga-ekwe omume na-eweta ụdị nile nke na-egosi dị ka isi ihe bụ n'ezie ubi, na na ha na-akpa àgwà iju (dị ka ngwa ngwa karịa ọsọ nke ìhè, na enweghi ngwụcha ọsọ, nchekwa nke ụgwọ na-egosi iwu mpụga okike, wdg). Na ha adịghị adị dị ka ezigbo ihe kama naanị dị ka "nwere ike" ma ọ bụ ubi. Ma ha nwere mmetụta na eziokwu. Echere m na e nwere ndị na-achọta Chineke na nke a. Nke mejupụtara ubi ma ọ bụ iwu okike kwa otu.
Naanị ebe a na-aga n'ihu dị ka akụkụ nke nsụhọ nkekọrịta.
Gbaghara igbu oge, mana ọ na-esiri ike ikwurịta, karịsịa ebe ọ bụ na ị na-ekwughachi ihe m kọwara. M ga-aza nkenke.
1. M kọwara na aghọtaghị m okwu. Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe dị, mụ onwe m enweghịkwa. Yabụ na ịdị adị m dị n'echiche onye? Nke m? Ma ọ bụrụ na ị sị na m dị, naanị ndị ọzọ adịghị adị, gịnịkwa ka i nwetara? Ọ bụrụ na ị na-echebu na ihe dị, ọ nweghị ihe kpatara na ị gaghị agbakwunye na ihe ndị ọzọ dịkwa. E kwuwerị, nke a bụ echiche anyị.
2. Ezi nkọwa bụ ihe yiri m kensinammuo.
3. N'ezie, a pụghị ịkọwa ya. Nke a abụghị ikwu na eziokwu adịghị ebe a. Echiche a abụghị eziokwu n'uche m, enweghịkwa ike ịkọwa ya. Ya mere, iwu nke causality n'uche m na ọ ka na-agaghị ekwe omume ikwurịta ya ma ọ bụ gosi ndị na-anabataghị ya.
4. Ọ nweghị ihe jikọrọ ya na physics. Physics ekwughị na ihe adịghị adị, kama na ọ bụchaghị ihe anyị chere na ha bụ (ma ọ bụkwanụ na o zighị ezi).
Mkparịta ụka ndị a anaghị adọrọ mmasị ma ahụghị m isi na mkparịta ụka a.
Cannabis Zara ọnwa isii gara aga
1. Nke a abụghị kpamkpam eziokwu n'ihi na ee na-ekweta na ndị ọzọ dị, na mmejọ bụ naanị na anyị nkọwa nke ebumnobi ịdị adị nke mpụga ihe na-adịghị nsụhọ.
2. Aghọtara m na ọ bụ naanị aha a ka a na-ewukwa na nkwupụta ndị ọzọ yana na ọ bụrụ otú ahụ kwalite mmalite mmalite. Dị ka ụdị ihe akaebe nke nkà ihe ọmụma na ikpughe nye Gd.
3. Kwurịtara ma ọ bụrụ na ị pụtara ikike ịbịaru nkwubi okwu wee lelee ma enwere iguzosi ike n'ezi ihe na nkwekọ n'amaghị ama? Mana ọ bụrụ otu a, kedu ihe ị chere gbasara nkwupụta gị na ị na-ahụ mmasị n'okwu nkwuputa. Na mkparịta ụka izugbe…
4. Ọ dị mma, nke a bụ isiokwu na-adọrọ mmasị nke na-apụta nke ukwuu na akwụkwọ ndị a ma ama na ebe a na saịtị a ọ na-abịakwa site n'oge ruo n'oge, ndị okpukpe na-ejikwa ya na ntụziaka ọzọ, na ndị na-eche echiche n'akụkụ ọzọ, ma. Narali chọrọ mgbasawanye na ajụjụ n'onwe ya.
1. Dabere na ihe ị na-ekwu na e nwere ndị ọzọ? Na banyere ha ị nwere ozi kpọmkwem, dị ka megide ebumnuche ịdị adị nke tebụl?
3. Akọwala m n'ọtụtụ ebe ihe okwu nkwutọ pụtara. Ndị a na-ekwu na ọ nweghị ụzọ a ga-esi nyochaa, n'ihi na onye ọ bụla na-ewusi ha ike ga-ajụ arụmụka ọ bụla n'otu ụzọ ahụ (ma eleghị anya nke a bụ naanị nrọ m). Ya mere, ahụghị m uru ọ bụla na mkparịta ụka a.
1. M na-eche na ọ nwere ike na-arụ ụka ukwuu n'ime dabeere n'uche. Ma ọ bụrụ otú ahụ, kwuo na tebụl dị n'ezie dị otú ahụ.
Yabụ nweta. Ị hụrụ ihe ka mma?
2-3. Daalụ. ugbu a enwetara m ya.
4. Dị ka m kwuru banyere mmekọrịta dị n'etiti sayensị ọgbara ọhụrụ na sayensị na nkà ihe ọmụma na nkà mmụta okpukpe, ọ ga-amasị m ịjụ, naanị m ga-ahọrọ ibu ụzọ gafere otu dobe na isiokwu ahụ. N'ihi na ọ na-adịkarị n'akwụkwọ na akwụkwọ ndị a ma ama. Ọ bụ ezie na okwu gị ebe a na-eju anya (fisiks nke oge a nwere ike igosi na ihe anyị na-aghọta bụ n'ezie). Ọ bụrụ na m ewepụghị ebumnuche gị kpamkpam na gburugburu 🙂
N'ezie echere m na nke a bụ nnukwu isiokwu zuru oke maka kọlụm karịsịa na ị bụ dọkịta na ya.
Soro ndị ndebanye aha 3,092 ọzọ
Kedu ihe ị chere maka nkwekọrịta Oslo?
Mgbasa ozi Nida
Obere oche VS oche ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Igbu onwe ya? Dịkarịa ala dị ka Ths.
Eli K. Gbanye Azịza nye Bel Shem Tov na ise siga, mkpụrụ obi Rabbi Nachman nke Breslav
mgbada Gbanye Azịza nye Bel Shem Tov na ise siga, mkpụrụ obi Rabbi Nachman nke Breslav
Agbakwunyela na ya ma ewepụla na ya Gbanye Azịza nye mkpọsa Nida
mmecha Gbanye Site na ọnwụ nke Prof. David Halvani Weiss nwụrụ anwụ (kọlụm 485)
Anụmanụ ya Gbanye Site na ọnwụ nke Prof. David Halvani Weiss nwụrụ anwụ (kọlụm 485)